Shirka shanta madaxweyne dowlad goboleed oo weli socda | KEYDMEDIA ONLINE
Shirka shanta madaxweyne dowlad goboleed oo weli socda
Wararkii ugu dambeeyay shirka ka socda xerada Xalane ee u dhaxeeya madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed ee xubnaha ka ah dowladda dhexe.
MUQDISHO, Soomaaliya - Inkastoo si jiitan ah ku socdo shirka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee ka frumay xerada Xalane haddana waxaa lasoo sheegayaa warar hoose oo ku saabsan in weli shirku sii socon doono inta laga gaarayo is af-garad dhammeystiran.
Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ayaa qaadacay shir uu qeyb ka yahay madaxweyne Farmaajo inay ka soo qeyb galaan, waxayna ku xireen shuruudo adag kuwaasoo sababay in uu dib u dhaco wada-hadalladii doorashooyinka dalka.
Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo oo diiddan inuu aqbalo shuruudaha maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa ugu dambeyn ogolaaday in shir gaara oo u dhaxeeya shanta madaxweyne dowlad goboleed ay qabsadaan, inkastoo shirkaasi si maalinle ah wixii laga wada-hadlay ay dib ula laabanayaan madaxweynaha Villada fadhiya ee Farmaajo oo bannaan joog ka ah shirka ka socda xerada Xalane.
Saaxiibada gaarka ah ee Farmaajo ayaa xalay uga war bixiyay natiijada is af-garadkii ugu horreeyay ee ku saabsanaa arrimaha shirka teendhada Afisiyooni dhinaca amniga iyo ka qeyb galka si shuruud la'aan ah, halka la isla gaaray iyo meesha ay wax marayaan. Madaxweyne Farmaajo ayaa si hoose ula socda dhaqdhaqaaqyada saddexda madaxweyne ee saaxiibka la ah ay ka sameynayaan shirka.
Shirkii saddexaad ayey maanta yeelan doonaan madaxda dowlad goboleedyada waxaana si gaara diiradda loogu saari doonaan ka doodista qodobka amniga ee shirka Afisyooni iyo in laga heshiiyo ajandaha shirka guud. iyadoo uu umuuqdo in meeshii hore la iskala soo dhawaanayo ayuu shirku kusii siqayaa heer gabagabo.
Beesha Caalamka ayaa dadaal dheer ku bixineysa sidii uu u mira dhali lahaa, iyagoo horay ugu amray madaxda dowlad goboleedyada in aysan magaalada Muqdisho ka bixin ilaa heshiis laga gaaro, waxayna wadaan weli cadaadis ku aaddan sidii loo dhammeyn lahaa is-mari waaga siyaasiyiinta ka dhaxeeya.
Dhinaca kale guddoomiyaha Golaha Shacabka BJFS ayaa isku dayay in uu burburiyo miraha laga sugayo shirka, isagoo sheegay inuu burburay heshiiskii 17 -ka Sebtember, safiirka dowladda Mareykanka Donald Yamamoto ayaa qadka taleefanka kula hadlay waxaana la baajiyay kulankii maanta ee muddo kororsiga sharci darrada ah loogu sameyn lahaa madaxweyne Farmaajo.